“एमाले मण्डलीय राष्ट्रवादी हो, यसमा विखण्डनवाद पनि छ” – मातृका यादव, नेता नेकपा माओवादी केन्द्र Weekly Nepal
“एमाले मण्डलीय राष्ट्रवादी हो, यसमा विखण्डनवाद पनि छ” – मातृका यादव, नेता नेकपा माओवादी केन्द्र
September 10th, 2017 | by Weekly Nepal
० तपाईहरुको ध्यान अहिले मधेश तिर छ, चुनावको तयारीमा लाग्नु भएको हो ?
– मधेश चाँही अहिले चुनावमा गएको छ र मधेशी जनताले चाँही अहिले बडो गम्भीर रुपमा सोच्दै अगाडि बढिरहेको छ । सबै पार्टीहरु उम्मेद्वार चयनको प्रक्रियामा छन्, हामी पनि त्यही प्रक्रियामा छौं । हाम्रो अध्यक्ष कमरेड पनि हामी सँगै मधेशमा प्रदेश नं. २ मा खटिरहनु भएको छ । त्यसैले हामीले चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रम एकै दिनमा ४–५ वटा गरिराखेका छौं । माओवादी प्रति मधेशी जनताको आकर्षण धेरै गुणा बढी रहेको छ ।
० दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तपाईहरुप्रति जनताको आकर्षण थिएन नी हाइन ?
– त्यो बेला हामी अलग थियौं । हामी विभाजित पनि थियौं । अर्को कुरो, मधेशी जनतामा भ्रम फैलाइएको थियो । अहिले जसरी पहाडका प्रचण्ड मधेशतिर लाग्नु भएको छ, मधेशवादी पार्टीको कुरा सुन्नमा लाग्नुभएको छ, त्यस्तै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि मधेशवादीहरुले एमाले, कांग्रेस र माओवादी उस्तै हुन्, एउटै हुन भन्ने किसिमको भ्रम दिएको थियो । तर, अहिले त्यो भ्रम हटेको छ । मधेशमा स्थापित एमालेका नेताहरु हजारौंको संख्यामा हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम भइरहेको छ ।
० तपाईको पार्टीमा धमाधम प्रवेशको लहर चलेको छ, प्रदेश सभाको चुनावमा कतिको आशा छ ?
– हामी चुनाव प्रचारप्रसारमा मात्र लागेका छैनौं, पार्टीमा प्रवेश गराउन पनि लागेका छैनौं । पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्ड र हामीहरु जनतालाई राहतको व्यवस्था गर्नेतिर हामी लागेका छौं । त्यस क्रममा हामी जनताका घरदैलोमा पनि पुगिरहेका छौं । अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्ड स्वयम् आफै जनतासँग सडकमा नै भेट गरिराख्नु भएको छ, चिया पसलमा भेट गरिराख्नु भएको छ र जनताको कुरा सुनिराख्नु भएको छ । त्यसैले हामी के विश्वास गरौ भने यस नयाँ बिकल्प साप्ताहित मार्फत जनताहरुलाई के भन्न चाहन्छौं भने हामी २०७० सालको अवस्थामा छैनौं । अब माओवादी केन्द्रको २०६४ तिरको अवस्था सिर्जना गर्दै छ । त्यसैले हामी के विश्वास दिलाउँछौं भने हाम्रो पार्टी प्रदेश नं. २ मा नं. पहिलो नम्बरको पार्टी बन्छ ।
० माओवादीबाट मधेशी जनताले के आशा गर्न सक्छन् त ? बाढी पिडितहरुलाई तपाइहरुले कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ ?
– एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने निश्चित रुपमा यहाँका कतिपय प्रतिगामी तत्व, राष्ट्रिय फटाहाहरुले हाम्रो पार्टीको मन्त्रीको छवि विर्गान र सरकारको छवि विगार्न नराम्रा कामहरु गरेका हुन् । हाम्रो पार्टी मधेशको पक्षमा एकताबद्ध भयो । सबै माओवादीहरु एकै ठाउँमा भयौं । त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र तपाईहरु देखिरहनु भएको छ, मधेशी जनताको पक्षमा, अधिकार प्राप्तिको कुरामा उहाँ निरन्तर लागि रहनु भएको छ । मधेशका हुलाकी राजमार्ग वर्षौदेखि योजनामा थियो, त्यस विषयमा कुनै काम भइरहेको थिएन, त्यो काम पनि प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वको बेलामा सिधै भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर त्यसलाई तीव्रता दिनुप¥यो भनेर कुरा राख्नु भएको थियो । थुप्रै विकास निर्माणका कामहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढीरहेको छ । रेल्वेको कुराहरु थियो, त्यो कामहरुलाई अगाडि बढाइएको छ र हाम्रै नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक बुद्धिदर बढेको छ । लोडसेडिङ्गको कुराहरुमा केही सुधार आएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन सरकार थियो, जुन प्रयासहरु भयो त्यसले के पुष्टि गरेको छ भने माओवादी सांच्चै नै मधेशप्रति एकदम सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा मधेशी जनताको मनमा अहिले परेको छ ।
० तर यी विकासका कुरा चुनावका बेलामा मात्र हुने अनि सरकारमा गएपछि बिर्सने चलन छ नि ?
– हामीले कहिले पनि मधेशलाई बिर्सिएका छैनौं र हामी निरन्तर रुपमा मधेश आन्दोलनमा पनि थियौं । हामी मधेशको पक्षमा, मधेशको अधिकार प्राप्तिको लडाइमा सधै लागेका थियौं । मधेशी जनताको विकासको पक्षमा पनि सधै छौं । जुन कुरा जनताले पनि बुझिरहेका छन् । हाम्रो पार्टीप्रति जुन भ्रम सिर्जना गराइएको थियो, त्यो भ्रम हटेको छ तर पहाडमा चाँही अहिले प्रचण्ड मधेशतिर ढल्कियो, मधेशी नेताहरुको कुरा सुन्यो, मधेशी जनताहरुको कुरा सुन्यो भन्ने जस्ता कुराहरु पनि आएको छ । तर, हाम्रो लागि के पहाड, के मधेश, के तराई । हाम्रो पार्टीको लागि सबै ठाउँको जनता समान छ । हामी सबै जनताहरुको कुरा सुन्छौं । अहिले मधेशमा हामी प्रत्यक्ष रुपमा हेरिरहेका छौं किनभने त्यहाँ हाम्रो आवश्यकता छ । बाढीले जनता पिडित छन् त्यसैले उनीहरुको लागि हामी मधेह केन्द्रीत भएका हौं ।
० तपाईहरुले नेपालको राजनीतिलाई धुव्रिकृत गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ नि ?
– एमाले मण्डलीय राष्ट्रवादी हो र हामीले चाँही मण्डली राष्ट्रवादको अर्को एउटा कुरा के देख्यौ भने यसमा विखण्डनवाद पनि छ । हामी चाहन्छौं, मधेश, पहाड र हिमाल एकताबद्ध होस्, राष्ट्रिय एकता मजबुद होस्, अनि मात्र देशमा जनताले अधिकार पाउँछ । उत्पीडित पहाडिया, उत्पीडित मधेशीय मिल्नु पर्छ र शोसक प्रवृतिका, देश लुटेरा पहाडिया शासकहरु होस् वा मधेशी शासकहरु ती हार्नुपर्छ र यसको लागि हामी के गरिरहेका छौं र त्यसको परिणाम के आइरहेको छ त्यो बुझ्न जरुरी छ ।